पेटमा गडबडी भए यसरी गर्न सकिन्छ घरमै उपचार – Etajakhabar
पेटमा गडबडी भए यसरी गर्न सकिन्छ घरमै उपचार
ताजा खबर काठमाडौं:- पेटमा विभिन्न समस्या निम्तिने गर्छन् । दुख्ने, ग्यास निम्तिने, कब्जियत हुने, पखाला लाग्ने, मासी पर्ने, उल्टी हुनेजस्ता सामान्य समस्या आइरहने गर्छन् । जुनसुकै वेला पेटमा हुन सक्ने यस्ता गडबडी लिएर अस्पताल पुग्नुभन्दा घरमै सामान्य उपचार गर्नु राम्रो हुन्छ । सामान्य सजगताले नै यस्ता सामान्य समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ । डा. राजेन्द्रकुमार गिरीले केही उपायबारे जानकारी दिएका छन् :
डा. राजेन्द्रकुमार गिरी प्रबन्ध निर्देशक, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति ग्यास भरिए पेट दुखे तथा पेटमा ग्यास भरिए ज्वानोको धुलो सेवनले फाइदा गर्छ । ३–५ ग्राम ज्वानोको धुलो कुनै पेय पदार्थ या खानामा राखेर खाँदा फाइदा गर्छ । पुदिनाको रस १०–२० मिलि या लेदो १–३ ग्राम सेवन गर्दा पनि पेट दुखेको तथा पेटमा ग्यास भरिएको ठीक गर्छ । पुदिनाले पेटमा शीतलता दिन्छ । बोजोको चूर्ण १२५–५०० मिलिग्राम या टुक्रा ५०० मिलिग्राम सेवन गर्ने तथा चुस्ने गर्दा पनि पेटमा भरिएको ग्यास हटाउन सहयोग पुग्छ । अजीर्ण भएमा तथा ग्यास भरिएमा टिमुरको धुलो १–२ ग्राम साँझ र बिहान सेवन गर्दा फाइदा गर्छ ।
बच्चाहरूको साधारण पेटदुखाइमा, अजीर्ण र अरुचि भएमा तुलसीको पातको रस र अदुवाको रस मिसाएर लिँदा फाइदा हुन्छ । कब्जियत भए कब्जियतले सताएको छ भने हर्रो, बर्रो र अमलाबाट तयार पारिएको त्रिफला चूर्ण ३–६ ग्राम राति सुत्नुअघि मनतातो पानीसँग सेवन गर्दा फाइदा गर्छ । पखाला लागे साधारण पखालामा जिराको धुलो ३ ग्राम मनतातो पानीसँग सेवन गर्दा लाभ मिल्छ ।
बेलको काँचो फलको गुदी आगोमा पकाएर महसँग सेवन गर्नाले पखाला लाग्दा सन्चो हुन्छ । बेलको चूर्ण ३–६ ग्राम, रस १०–२० मिलिलिटर सेवन गर्नाले दिसासँगै रगत आउने समस्या तथा रगतमासीको समस्या समाधान हुन्छ । बान्ता भए वाकवाकी लाग्दा या उल्टी हुँदा दालचिनी या सुकमेल प्रयोग गर्न सकिन्छ । शुद्ध दालचिनी वा सुकमेलको १–३ ग्राम धुलो सेवन गर्दा बान्ता रोकिन्छ । बान्ता हुँदा अदुवाको रस वा सुकेको अदुवाको धुलो सेवन गर्दा पनि फाइदा गर्छ ।ग्यास्ट्राइटिक भए ग्यास्ट्राइटिकले सताउँदा अमला, मेथी, कुरिलोको जराको धुलो, जेठीमधुमध्ये कुनै एक जडीबुटीको धुलो ३ ग्रामसम्म साँझ–बिहान प्रयोग गर्दा लाभ मिल्छ ।नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २४, २०७३ समय: ९:१६:११